Izindaba - Amathrendi ekukhanyeni kwezebhizinisi: Ukuguquguquka nokusebenza kahle
Inkathi yedijithali ibe inguquko yangempela emhlabeni we okudayisa. Ukuvela kwezohwebo ze-elekthronikhi kudinga ushintsho lwendlela ekwakhiweni kwamasu wokuhweba. Kuleli qiniso elisha, iyiphi indima edlalwa yizitolo zomzimba?
Izikhala zokuhweba zendabuko zibhekene nenselelo engakaze ibonwe ngaphambili: Ukwakhiwa kokuhlangenwe nakho okwehlukanisa okudlula ukuboniswa nokuthengiswa kwemikhiqizo. Ukuvuselela izinzwa zabathengi abangaba abathengi sekuwumkhuba oyisisekelo wokuheha ukunakwa kwabo: Lokhu kufaka izinto ezinjengephunga, izinga lokushisa nokukhanya. Imininingwane ibalulekile.
Ngalo mqondo, ukuthengisa okubukwayo kufanekisela into esemqoka emhlabeni wezentengiso. Isiyalo esihlanganisa ukusebenzelana kwengqondo, ukumaketha, ukwakheka kanye nezici zobuchwepheshe, ngenhloso yokukhuthaza ukusetshenziswa endaweni yokuthengisa ngaphandle kokulahlekelwa ukugxila kumanani omkhiqizo.
Ushintsho lwengqondo ekukhanyeni kwezebhizinisi
Ngaphandle kokubaluleka kokuthengiswa kwe-inthanethi, izitolo ezibonakalayo ziyaqhubeka nokumelela isiteshi esibalulekile sokuthengisa ngenxa yamandla abo okuxhumana ngqo namakhasimende. Izikhala zokuhweba zimelela ingqikithi yemikhiqizo ngomklamo wobungani oguqulwe abathengi. Ngakho-ke, ukukhanyisa kudlala indima ebalulekile ekwakheni imiqondo emisha yokuthengisa. Izinzuzo zayo eziyinhloko yilezi:
● Ukudalwa komkhiqizo: Ukukhanyisa okwenzelwe ukuqondanisa nobuntu nezinhloso zomkhiqizo kuzosiza ukwakha indawo ehlukanisiwe futhi engakhonjwa ngamakhasimende.
Ukuthuthukisa: Ukukhanyisa kufanele kuthuthukise izinto ekubonisweni, kepha kubalulekile futhi ukuthi kusize ukwengeza ukusakazwa lapho kuthengiswa khona. Ngaphandle kwezinqubo ezihlobene nokusebenza kahle kwamandla, ukukhetha amalambu afanele entweni ngayinye ekubonisweni kumele kube wumgogodla wecebo elihle lokukhanyisa kunoma iyiphi indawo yokuhweba (okokugqoka, ukudla, izitolo zobuchwepheshe, njll.). Singasebenzisa imithombo ekhanyayo enesibani esithile sokukhanya ngokusebenzisa ama-LED akhethekile ukukhulisa imibala emhlophe, into ewusizo kakhulu ezitolo zemfashini, noma ukusebenzisa izithunzi ezicace bha njengamabala abomvu ukukhulisa ukubukeka kwenyama, noma okuluhlaza okwesibhakabhaka, ziwusizo olukhulu ekukhipheni okuhle kakhulu kwezinhlanzi.
● Ukuguqulwa kwamandla: Imiklamo yokukhanyisa ezohwebo inganikeza ngamasu wokunika amandla izikhala zokuhweba nezombukiso. Ukusetshenziswa kokukhanyisa okunamandla okuguqula ukushisa kombala (CCT) ngokuya ngesizini yonyaka, izithunzi ezikhona noma ngisho nesikhathi sosuku, kungadala izikhala ze-dinamise ezingcono. Lawa maqhinga angasiza ukuhambisa kahle abasebenzisi esitolo lapho kutholakala khona izimoto eziningi kakhulu, noma ngakolunye uhlangothi, ukuheha amakhasimende lapho isitolo sithule, ngokufana nendlela ezinye izinto ezisetshenziswa ngayo ekwenzeni i-neuromarketing, ngokwesibonelo, umculo.
Idizayini yokukhanyisa kwezebhizinisi iguqulelwe esikhaleni ngasinye
Ukukhanya kwezindawo ezivamile namaphaseji
Ngokuvamile, ukukhanya kulezi zindawo kunokugxila kokusebenza, njengengxenye yako indlela efanele yokukhanyisa izoba nomthelela oqondile embonweni wamakhasimende wokunethezeka ngakho-ke ezinqumweni zabo zokuthenga, ngokwenza ngcono isipiliyoni esitolo. Ngalo mqondo, ukuzivumelanisa nezimo kuyinto eyisisekelo ngakho-ke, kufanele kubhekwe okulandelayo:
● Ukuhamba kwezimoto
● Ukusetshenziswa kwezikhala
Kungcono ukuhlanganisa izingqimba zokukhanyisa okungaphezulu komfaniswano nezinto zokukhanyisa zokugqamisa ukuqondisa ukunakwa kwabasebenzisi kuzinto ezithile.
Isitolo ukukhanyisa amawindi
Amawindi ezitolo ayinto yokuheha enomthelela omkhulu ngokomzwelo kumsebenzisi, yingakho ukubaluleka kokuklanywa kwezibane kulezi zikhala, ukwenza into ejabulisa futhi ihehe ukunakwa.
Ngokombono wezobuchwepheshe, ukukhanyiswa kwewindi lesitolo kumele kuhlangabezane nezidingo zokukhiqiza imibala ezifuna kakhulu nge-Colour Rendering Index ephezulu (CRI) lokho kunika umbono oqondile wemikhiqizo ngaphandle kokukhohlwa ngengxenye yobuhle. Kubalulekile futhi ukuba nezinhlelo zokukhanyisa eziguquguqukayo nezishintshashintshayo ezifana nezikhanyisi zethrekhi, ezizokwengeza ukuguquguquka kokufakwa, njengoba kungahanjiswa ukuvumelanisa nezinguquko zedizayini ezenzeka ngezikhathi ezahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, ukufakwa kwama-luminaires anamazinga ahlukahlukene wokukhanya okukhanyayo nama-optics kuzokwenza ukuthi kube lula ukudala imiphumela emikhulu noma engaphansi ngokudlala ngezithunzi zobulukhuni obuhlukile ngokuya ngomphumela oyifunayo, ngaleyo ndlela kubhekwane nale nto eguquguqukayo yokukhanyisa.
Lapho uthatha isinqumo sokukhanyisa isitolo, kubalulekile ukugxila ezinhlosweni ezilandelayo:
● Ukuthuthukisa ukuheha kwemikhiqizo. Ama-Luminaires anika amandla ukuhlanganiswa kwamamojula ahlukahlukene ayindlela ethakazelisa kakhulu. Ukuguquguquka kokufakwa kwabo kwenza kube lula ukuzivumelanisa nokuthengisa okubukwayo okuhlukile
● Ukuqondisa ikhasimende esikhaleni nokubenza bazizwe bekhululekile. Isu elisebenzayo lokukhanyisa kumele lihambisane nohambo lwamakhasimende lomkhiqizo, okungukuthi, inqubo ikhasimende elidlula kuyo ngaphambi kokuthola umkhiqizo noma insizakalo. Kumongo wedijithali omusha, lolu hambo lungaqala ezingosini ze-inthanethi, ngakho-ke ukuhlanganiswa kwesiteshi kubalulekile. Ngokushintsha ubukhulu bokukhanya okukhanyayo noma ukushisa kombala kokukhanya okusetshenzisiwe, singaqondisa ikhasimende emaphoyiseni athakazelisayo umkhiqizo awubheka njengofaneleke kakhulu ngaphakathi kwesipiliyoni sokuthenga komhlaba ngendlela ewuketshezi nangokwemvelo.
● Thola izindawo ezahlukene nezindawo zokuhweba. Izinhlelo zokuphatha ukukhanyisa ezihlakaniphile ziyinzuzo enkulu, evumela ukwehluka kokukhanyisa ukuthi kudalwe kusuka kudivayisi eyodwa yedijithali ngokuya ngezidingo ezithile, ngaphandle kwesidingo sokushintsha amalambu noma ezinye izinto zokufaka. Ukuzivumelanisa nezimo kuyisihluthulelo sokwakha nokonga izindleko.
E-Lamp, sinolwazi olunzulu ngokubambisana namaqembu abhekele amaphrojekthi wokukhanyisa ezentengiselwano. Kule nkambu, sengeza inani kuphrojekthi ngayinye ngokwakha izixazululo ezenziwe ngezibane zokukhanyisa zohlelo ngalunye.